Boerboel Dog - တောင်အာဖရိက Boerboels အကြောင်းသင်ဘာတွေသိထားသင့်လဲ - Breeds
Boerboel Dog - တောင်အာဖရိက Boerboels အကြောင်းသင်ဘာတွေသိထားသင့်လဲ
Boo-r-bull ဟုအသံထွက်သည့် Boerboel သည် အုပ်ထိန်းသူခွေးကြီး အရာလည်းတောင်အာဖရိက Mastiff အဖြစ်လူသိများသည်။
တစ် ဦး အထင်ကြီးဖောက်, သူတို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအာဏာအရှိဆုံးခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ် သူတို့ကိုက်သောအခါတစ်စတုရန်းလက်မလျှင်ဖိအား 450 ပေါင်ကျော်ဖိအား။
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ကောင်းပြီ, Lion နှင့် Great White Shark သည်စတုရန်းလက်မတစ်ပေါင်လျှင် ၆၀၀ ပေါင်ဖိအားရှိသည်။
ကျနော်တို့ Boerboel ငြင်းပယ်မဟုတ်ပါဘူး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ခွေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် devices များမှထွက်ခွာလျှင်။
ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပိုင်ရှင်၊ အစောပိုင်းလေ့ကျင့်မှုနှင့်လူမှုရေးနှင့်အတူခွေးများကဲ့သို့ပင် Boerboel သည်ကလေးများနှင့်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ။
ဒီကြီးမားတဲ့အုပ်ထိန်းသူခွေးကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရသလဲဆိုတာကိုကြီးမားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကြီးမားတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ကဆက်ပြီးဖတ်ပါ။
အရွယ်အစား ၂၄-၂၈ လက်မ
အလေးချိန် 140-200 ပေါင် (အထီး) နှင့် 120-160 ပေါင် (အမျိုးသမီး)
သက်တမ်း 8 - 10 နှစ်
အရောင်အမျိုးမျိုး Fawn, အနီရောင်, ဘရောင်း, Brindle, Cream
အပူချိန် , အသိဉာဏ်, တက်ကြွ, သစ္စာစောင့်သိ, ချစ်ခင်, ယုံကြည်မှု
အခြားအမည်များ တောင်အာဖရိက Mastiff, တောင်အာဖရိက Boerboel
တောင်အာဖရိက Boerboel Dog ဆိုတာဘာလဲ။
တစ် ဦး က Boerboel Mastiff သည်ပြုစုစောင့်ရှောက်
တစ် ဦး က Boerboel ခွေးလေ့ကျင့်ခန်း
ကြီးမားသော & အစွမ်းထက်ခွေးများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအကြံပေးချက်
သင်၏ Boerboel ကိုဆက်သွယ်ပါ
'boer' ဟူသောစကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည် လယ်သမားဆိုလိုတာက ), ဒီခွေး၏မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ရန်ခဲယဉ်းသည်မဟုတ်။
Boerbull သည်တောင်အာဖရိကတွင်၎င်းတို့၏အိမ်နှင့်မြေယာကိုကာကွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောခွေးမျိုးစိတ် (ဆိုလိုသည်မှာ Guardian) ဖြစ်သည်။
Boerboel သည်မည်သည့်နေရာမှမည်သည့်နေရာမှမည်သည့်နေရာမှဆင်းသက်လာသည်ကိုမူမသိရသေးသော်လည်းဒတ်ခ်ျ၊ ဂျာမန်ဟုယူဆရသည် နှင့် Huguenot အခြေချနေထိုင်သူများ တောင်အာဖရိကသို့ကြီးမားသောအုပ်ထိန်းသူခွေးများကိုခေါ်ဆောင်လာသည်။
ဒီခွေးတွေအချင်းချင်းသွေးပြန်ကြဲတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟာ Boerboel ခွေးလို့သိခဲ့ကြတယ်။
မကြာသေးမီကအမေရိကန် Kennel ကလပ်သို့ Boerboel ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Working Group သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။
သူတို့ကိုမူလကအုပ်ထိန်းသူများနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအဖြစ်မွေးမြူခဲ့ကြသော်လည်းမိသားစုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ရခြင်းမှာလည်း ပို၍ ပျော်ရွှင်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့စွမ်းအားရှိပေမဲ့သူတို့ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျင်းရိတဲ့ခွေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်
ခွေးပေါက်စများကဲ့သို့ Boerboel ခွေးများကိုအလွယ်တကူလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
အမှားကသူတို့ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဥာဏ်ပညာရှိတာကြောင့်ဒီဟာကိုဆက်တည်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တာပဲ။ အစောပိုင်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့်လူမှုရေးမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်လွယ်ကူတဲ့ Boerboel ခွေးကလေးဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် hooligan အဖြစ်သို့လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းသွားနိုင်သည်။
Boerboel ၏စျေးနှုန်းများသည်သိသိသာသာကွာခြားနိုင်သည်၊ ခွေးတစ်ကောင်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ မှ ၂၀၀၀ ဒေါ်လာကြားကြားရှိသည် ။
ဈေးနှုန်းမြင့်မားသောကြောင့်၎င်းသည်ခွေးတစ်ကောင်သည်မှားယွင်းသောလက်သို့ရောက်ရှိရန်သို့မဟုတ် Boerboel ကယ်ဆယ်ရေးခွေးအရေအတွက်နည်းပါးသောအတွေ့အကြုံမရှိသောမျိုးဆက်များနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများကိုလျော့နည်းစေသည်။
၎င်းတို့၏မိခင်၏အရွယ်အစားကြောင့်အမှိုက်သရိုက်များသည်အရွယ်အစား (များသောအားဖြင့် ၇ ခုံမှ ၁၀ ကောင်အထိ) အတော်လေးကြီးမားသည်။
သင်၏ခွေးသည် ၁၈-၂၄ လအတွင်းမည်သည့်နေရာ၌မဆိုရင့်ကျက်မှုရှိမည်ဟုမျှော်လင့်သင့်သည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကြောင့်ဒီကလေးတွေဟာiantရာမသားပေါက်တွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ခွေးကလေးကိုသူတို့ကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှနို့တိုက်ကျွေးတာကိုဂရုပြုပါ။
Boerboel Mastiff ကြီးထွားမှုဇယား
ပေါင်အလေးချိန် (Min-Max Range)
၈ ပတ် ၁၆ နှစ်ဆယ်
၁၂ ပတ် ၂၄ ၃၀
၁၆ ပတ် ၃၂ ၄၀
6 လ 52 ၆၅
၁၂ လ ၁၀၄ 130
၁၈ လ 156 195
သူတို့ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်သစ္စာစောင့်သိပြီးမိသားစုနဲ့အိမ်ကိုအလွန်အမင်းကာကွယ်ဖို့တာ ၀ န်ယူရလိမ့်မယ် ။
အံ့သြစရာကောင်းတာကသူတို့အလုပ်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲ။ သူတို့ကရေးစပ်ဖြစ်ကြပြီး တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ထားရှိသည် ဒါကြောင့် Boerboel ဟာရှာနေတဲ့မိသားစုခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။
Boerboel Mastiff စိတ်သဘောထားအကျဉ်းချုပ်
သူတို့ကိုမကြာခဏ“ velcro dogs” များဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့သည်သင်နှင့်အတူရှိနေခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်၊
သူတို့ဘယ်လောက်အင်အားကြီးမားသည် (စတုရန်းလက်မလျှင်ဖိအား ၄၅၀ ပေါင်ဖိအား)၊ မပျော်သောသို့မဟုတ်စိတ်မရှည်သောခွေးတစ်ကောင်သည်သင်၏အိမ်သို့အဝေးတွင်ရှိနေစဉ်သင့်အိမ်ကိုများစွာထိခိုက်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
သင်ဤခွေးနှင့်အတူတစ် ဦး တည်းသုံးစွဲအချိန်နိမ့်ဆုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်သင့်ပါတယ် ခွေးတစ်ကောင်ကိုလမ်းလျှောက်ပါသို့မဟုတ်တစ်နာရီကျော်သင်ထွက်ခွာရန်လိုအပ်လျှင်မိသားစု / သူငယ်ချင်းများကိုလာခိုင်းပါ။
လေ့ကျင့်ရေးနှင့် လူမှုရေးငယ်ရွယ်စတင်ရန်လိုအပ်ပါသည် (အကောင်းဆုံးကတော့ ၈ ပတ်အရလူငယ်) ။ ရက်သတ္တပတ် ၈ မှ ၁၆ အထိအတွေ့အကြုံအသစ်များ၊ လူများနှင့်နေရာများကိုသူတို့တွေ့ကြုံခံစားပါစေ။
တောင်အာဖရိက Boerboels ပျင်းစရာကောင်းပြီးသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်မပေးလျှင်မိမိတို့ကိုယ်ကို ဆက်၍ နေရန်နည်းလမ်းများရှာလိမ့်မည်။
သူတို့သည်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်လည်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုင်သည် (သူတို့နှင့်အတူကြီးပြင်းလာလျှင်သို့မဟုတ်ငယ်ရွယ်သော အချိန်မှစ၍ ပေါင်းသင်းခြင်း) ။ မည်သည့်ခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်အခြားခြေလေးချောင်း၊ နှစ်ချောင်းသို့မဟုတ်ကြီးမားသောပါးစပ်ကြီးသတ္တဝါများသည်အလွန်ဆိုးရွားပြီးမိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းသူတို့လေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်သည်။
ဒီလူတွေကကြီးမားပြီးအားကောင်းတယ်။ သူတို့ကအကောင်းဆုံးမိသားစုခွေးဖြစ်နိုင်သည် , ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်သောလူတို့ကကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှသာ။
နင့်ခြေထောက်ပေါ်လျှောက်နိုင်အောင်ပါးနပ်စွာနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာနှင့်စမတ်ကျခြင်းတို့သည်သင် Boerboel မတိုင်မီအတွေ့အကြုံရှိခွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမည်။
လမ်းညွှန် 2000 ကယ်လိုရီ
iantရာမသားပေါက်များသည်လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့်ကြီးထွားလာသည်၊ သူတို့၏အရိုးများသည်သိပ်သည်းမှုမရှိပါ ထို့ကြောင့်အားနည်း။
ထိုအကြောင်းကြောင့် Boerboel သည်သူတို့၏အစားအစာတွင်ကယ်လ်ဆီယမ်များစွာလိုအပ်သည်။
gရာဖောက်ခွေးပေါက်စများတွင်ပိုလျှံကယ်လစီယမ် အခြေအနေများ၏အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် အရိုးပွရောဂါနှင့် pansteatitis အပါအဝငျ။
သင်၏ Boerboel ခွေးကိုအစာမကျွေးရန်သတိထားပါ။
အဝလွန်ခြင်းသည်အရိုးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ breရာမဝတ်ရည်ထက်ပိုသောအဘယ်သူမျှမ ။
သငျသညျအစဉ်အမြဲခါးကိုတွေ့မြင်သင့်တယ်သူသူတစ် ဦး ရှိသင့်သည် ငှက်ရဲ့မျက်စိအမြင်ကနေ hourglass ပုံ ။ အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အနေနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်သည်အဆစ်များကိုအလွန်အကျွံဖိအားပေးနိုင်ပြီးသူ့ကိုတင်ပါးဆုံရိုးသို့မဟုတ်တံတောင်ဆစ် dysplasia အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မိနစ်များ မိနစ် ၁၂၀
တစ် ဦး Boerboel လေ့ကျင့်ခန်းများများလိုအပ်နေစဉ်, သူသည်သူ၏လေ့ကျင့်ခန်းကျော်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်တစ် ဦး ခွေးပေါက်စနေစဉ်အထူးသဖြင့်နေစဉ်, အနည်းငယ်ပိုပြီးစောင့်ရှောက်မှု, ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ခွေးတစ်ကောင်အနေဖြင့် ၅ မိနစ်ကြာအုပ်ချုပ်မှုကိုလိုက်နာပါ။
၅ လအရွယ်တိုင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း ၅ မိနစ်သည်သင်၏ခွေးလုပ်ဆောင်သင့်သည့်အများဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၃ လအရွယ်ရှိခွေးကလေးကိုတစ်နေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့်လေ့ကျင့်သင့်သည်။
Boerboel လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအကြံဥာဏ်များ -
သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖောက်တက် / ဆင်းတက်ခွင့်မပြုပါနဲ့
ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်ငယ်ရွယ်ပါကသူကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ပိုင်ရှင်ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်။ မည်သည့်အရာကမျှသူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော Boerboel ကိုတန်ဖိုးမထားနိုင်ပါ။
လူနေထူထပ်သောဒေသများတွင်သင်ပိုကောင်းနိုင်သည် လမ်းလျှောက်လာသောအခါသူ့ကို leash အပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်း သူသည်မည်မျှရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ပြီးမည်မျှပင်ကျွမ်းကျင်ပါစေလူကြီးအချို့သည်ကြီးမားသောဝတ်ရည်များဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခံရသည်။
အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၆၀ မှ ၂၀ မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန်ရည်မှန်းထားသည် ။ သူတို့သည်ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံသောခြံထဲတွင်ရှင်သန်ကာအခြားတိရစ္ဆာန်များကိုကင်းလှည့ ်၍ စောင့်ရှောက်နိုင်သည်။
သင်သူ့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးနှစ်မျိုးစလုံးကိုစတင်ပါ (၎င်းသည်အသက် ၈ ပတ်ခန့်ဖြစ်သင့်သည်)
သူ့ကို“ potty go” လိုချင်သည့်နေရာကိုပြပြီးသူလုပ်သည့်အခါသူ့ကိုချီးမြှောက်ပြီးဆုချပါ။ မလိုလားအပ်သောအပြုအမူများကိုရှောင်ပါ၊ ပို၍ သင့်လျော်သောအပြုအမူဖြင့်အစားထိုးပါ။
aversive နည်းစနစ်များကိုဘယ်တော့မှမသုံးပါနှင့်။ ကျနော်တို့ကပြစ်ဒဏ်ရုံသိ, အမျိုးအစား ပြproblemနာအပြုအမူများကိုဖန်တီးပြီးပိုမိုဆိုးရွားစေသည် ။
သူ့ကိုကမ္ဘာကြီးကမ်းလှမ်းသည့်အရာနှင့်မိတ်ဆက်ပေးပါ။ လူများ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ အရာအားလုံးသည်၎င်းကိုနှေးစေပြီးသူ့ကိုမတင်ပါနှင့်။
သူနှင့်ပေါင်းသင်းပါ အခြားဖော်ရွေခွေး ။ ခင်ဗျားသူ့ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ကိုသင်ယူစေချင်တယ်။
သူ၏အရွယ်အစားနှင့်စွမ်းအားကြောင့်သင်မလိုလားအပ်သောအလေ့အထများကိုခွေးတစ်ကောင်မှကောက်ယူရန်သင်မတတ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သူ့အတွက်သူ့သူငယ်ချင်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
သူကစမတ်နှင့် trainable င်, ဒါကြောင့်သိမ်းပိုက်သည်သူ၏စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လော့။
သူဟာအစားအစာဒါမှမဟုတ်ကစားစရာအသားပေးတဲ့ခွေးဟုတ်မဟုတ်တွက်ကြည့်ပြီးအဲဒါကိုသင့်ရဲ့အကျိုးအတွက်သုံးပါ။ သူ့ကိုကိုက်ညီတဲ့ ဦး နှောက်ဂိမ်းကိုရွေးပါ ) ။
အကယ်၍ သူသည်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ခဲ့ပါကဟင်းသီးဟင်းရွက်များအောက်တွင်အရသာခံ။ သူတို့ကိုနှင်ထုတ်ရန်တိုက်တွန်းပါ။ အိုးတစ်လုံးကိုသူရွေးလိုက်တာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့တစ်ယောက်တည်းသောအားရစရာတစ်ခုကိုထားပါ။
အကယ်၍ သူသည်ကစားစရာကို ဦး စားပေးသူဖြစ်ပါကကစားစရာများ၏အမည်များကိုသင်ပေးပါ။
သူကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအခြေခံပြီးအရုပ်တစ်ခုကိုရွေးနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာတဲ့အခါ၊ အခြားကစားစရာများ (တူညီတဲ့နည်းစနစ်ကိုသုံးပြီး) တံဆိပ်ကပ်ခြင်းကိုဆက်လုပ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျန်းမာသော်လည်း Boerboel သည်သိသာသောကျန်းမာရေးအခြေအနေနှစ်ခုဖြစ်သည့် Dysplasia နှင့် Eye Lid ectropion ဖြစ်သည်။
တင်ပါးနှင့်တံတောင်ဆစ် Dysplasia ကြီးမားသောနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးဝတ်ရည်အတွက်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ခွေးအတွက်နာကျင်မှုနှင့်တောင့်တင်းမှုကိုဖြစ်စေသည့်အဆစ်အဆစ်များတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိသည်။
အခြေအနေကိုဆေးဝါးဖြင့်ကုသနိုင်ပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုသည်လည်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇ၊ အာဟာရနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သည်လည်းဤအခြေအနေများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
မျက်လုံးပြuesနာများသည်လည်း Boerboel တွင်တွေ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားမျက်စိ lids ကိုထိခိုက်သောအခြေအနေများပါ၏ ectropion နှင့် entropion ။ မျက်ခွံအပြင်ဘက်သို့မဟုတ်အတွင်းလှည့်ဘယ်မှာဖြစ်စေ။
ထိုအကြောင်းကြောင့် Boerboel အတွက်မျက်စိစစ်ဆေးသင့်သည်။
dogရာမခွေးဖောက် အားကြီးသော, ကြွက်သားအသွင်အပြင်နှင့်အတူ ။
သူ၏ ဦး ခေါင်းသည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်တူပြီးယောက်ျားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အမြဲတမ်းပိုကြီးသင့်သည်။
သူတို့မှာအနက်ရောင်မျက်နှာဖုံးရှိတယ်၊ လူအများစုကအနက်ရောင် Boerboels ကိုရှာကြတယ် တချို့တောင်မှ piebald နိုင်ပါတယ် နှင့်အချို့သောအဖြူအမှတ်အသားများရှိသည်။
သူတို့ရဲ့ချောချောမွေ့မွေ့အင်္ကျီနှင့်အတူ, ဖြီးလိမ်းပုံသည်လေပြေပါ! တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ချောင်းသည်ဤခွေးဖောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ အနံ့ဆိုးများ၌ဆံပင်များများမဆုံနိုင်သဖြင့်သင့်အိမ်၌အထူးသဖြင့်ခွေးမွှေးအနံ့ကိုသတိမပြုမိပါ။
၄ င်းတို့သည်သူတို့၏မျက်စိနှင့်နားရောဂါများကိုခံစားနိုင်သဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၂-၃ ကြိမ်စစ်ဆေးပါ။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကစတင်ကိုင်တွယ်ခြင်းကိုဤနေရာတွင်ကူညီလိမ့်မည်။
ပုံမှန်သွားများသန့်ရှင်းရေးသည်သူရဲကောင်းလူဖြူများကို pearly ထားရန်လိုအပ်သည်။
နောက်တဖန်, puppyhood, တိုတောင်းသောအစည်းအဝေးများအနေဖြင့်မှန်မှန်သန့်ရှင်းရေးမိတ်ဆက်ပေးသည်။ လေ့လာမှုများပြသခဲ့ကြသည် အပတ်စဉ်ဆန့်ကျင်ဖက်သည်နေ့စဉ်သွားသွားတိုက်ခြင်းသည်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ပြားပြားများတည်ဆောက်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်
အစွမ်းထက်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်ဘဲပထမဆုံးပိုင်ရှင်တွေအတွက်မဟုတ်ဘဲ Boerboel ဟာအသိဉာဏ်ရှိသူ၊ သစ္စာစောင့်သိသူဖြစ်တယ်။
သူဟာသူ့လူတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့အတူရှိနေတာထက်ပိုပြီးမချစ်ပါဘူး။ သူတို့သည်သွားလေရာရာ၌သူတို့လိုက်ကြ၏။
Boerboel တွင်အစောပိုင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤရှုပ်ထွေးပြီးလွယ်ကူသောခွေးကလေးသည်လမ်းပြလမ်းပြမှုမရှိဘဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။
တစ် ဦး ကခိုင်မာတဲ့နှင့်တည်ငြိမ်အဖော် သူ့မိသားစုကိုသစ္စာစောင့်သိသူ၊ ဒါပေမယ့်သူလိုအပ်တာကိုမင်းပေးလို့ရမလား။ အောက်ကိုသိပါစေ။
ဝါယာကြိုးဆံပင် dachshund: ခွေးပေါက်စ, မြိုးဆကျ & မွေးမြူရေးလမ်းညွှန်
Dog Name Generator (နာမည် ၁၀၀၀၀ ကျော်)
The Gentle Giant: Great Dane Lab ကမင်းအတွက်ရောလား။
အနီရောင်ရွှေဝါရောင် retriever: ခွေးမွေးမြူရေးလမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ
Pitsky ခွေးမွေးမြူရေးအချက်အလက်: Pitbull Husky Mix
အဘယ်ကြောင့် Havapoo ခွေးပိုင်ရှင်တိုင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်သည်
ရှားရှားပါးပါး White Malamute အကြောင်းသိရန်သင်လိုအပ်သည်
Chiweenie - Ultimate Chihuahua Dachshund ရောစပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်
lab နှင့် rottweiler ရောစပ်ထားသောခွေးများ
cocker spaniel နှင့် poodle ရောမွှေပါ
golden retriver black lab ရောစပ်သည်